Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. डडेल्धुरामा अजयमेरुमा निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा सुरु – Emountain TV
डडेल्धुरा, ३ फागुन । डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले भिडियो एक्सरे मेसिन खरिद गरी निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा दिन थालेको छ । गाउँपालिकामा नै निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा पाएपछि सदुरमुकामसम्म जानु पर्ने बाध्यता हटेको छ ।
डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा दिन थालेको छ । ६ वटा वडा रहेको अजयमेरु गाउँपालिकाको सदरमुकाम भद्रपुरमा रहेको भद्रपुर स्वास्थ्य चौकीबाट नियमित तथा निशुल्क सेवा दिँदै आएको छ । गाउँपालिका भरीका गर्भवती महिलाहरुको अहिले निशुल्क चेकजाँच भईरहेको छ । सामान्य चेकजाँचका लागि पनि डडेल्धुरा सदरमुकाम अस्पताल नै पठाउनु पर्ने बाध्यता हटेको भद्रपुर स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ ।
गाउँमै निःशुल्क भिडीयो एक्सरे सेवा पाएपछि यस क्षेत्रका महिलाहरुलाई सहज भएको छ । उनीेहरुलाई डडेल्धुरा सदरमुकाम जान आउने लाग्ने खर्च,समय समेत बचत भएको छ । साथै गर्भअवस्थामा कच्ची सडकको सकसपूर्ण यात्राबाट समेत मुक्ति मिलेको छ ।
शिशु मुत्यु दर तथा बाल मुत्यु दर शून्य बनाउने गाउँपालिको नीति अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको महिलाहरुको आमा र बच्चा स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी सेवा दिन थालिएको हो । यही फागुन १० गतेदेखि वडा नं. ५ को देवलदिव्यपुरबाट तथा आवश्यक परे हरेक वडाहरुमा सेवा पुर्‍याउने अजयमेरु गाउँपालिकाको योजना रहेको छ ।
अजयमेरु गाउँपालिकाको ६ वटै वडामा स्वास्थ्य चौकी छन् । विकट गाउँमा सामुदायिक सेवा क्लिनिकहरु स्थापना गरिएका छन् । गाउँपालिकाले यसै वर्ष पनि २ वटा नयाँ क्लिनिकहरु थप गरेको छ । स्थानीय सरकारले गाउँमै स्वास्थ्य सेवा दिन थालेपछि स्थानीयलाई राहात मिलेको छ ।